Xiddiga Ku Guuleystay Kabta Dahabka Yurub Ee Ciro Immobile Oo Shaaciyey Magaca Koox Premier League Ah Oo Dalb Usoo Dirtay - Gool24.Net
Xiddiga Ku Guuleystay Kabta Dahabka Yurub Ee Ciro Immobile Oo Shaaciyey Magaca Koox Premier League Ah Oo Dalb Usoo Dirtay
August 11, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Lazio ee Ciro Immobile waxa uu toddobaadkii hore ku guuleystay kabta dahabka ah ee qaaradda Yurub isaga oo ku garaacay Cristiano Ronaldo iyo Robert Lewandowski oo kusoo xigay, laakiin maalmo kaddib markii uu soo dhamaaday horyaalka Serie A, waxa soo gaadhay dalab uga yimid koox ka tirsan naadiyada Ingiriiska ee Premier League.
Ciro Immobile oo dhaliyey 36 gool xili ciyaareedkan, kabta dahabka ah ee Serie A iyo midda Yurub na isku darsaday, waxa wakiilkiisa soo gaadhay dalab xooggan oo ka yimid naadiyada Premier League mid ka mid ah, taas oo doonaysa inuu noqdo hoggaamiyeyaashooda afka hore ee weerarka ee xili ciyaareedka bisha dambe ee September bilaabmi doona.
Xiddigan oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in kooxda lala xidhiidhinayay Sucuudigu inuu iibsanayo ee Newcastle United ay lasoo xidhiidhay wakiilkiisa oo ay soo gaadhsiisay dalab ay ku doonayaan inay kula saxeexdaan, waxaanay arrintani dhacday intii ay sida weyn suuqa ugu jirtay in shirkadda PFI ee maalgelinta dibedda u qaabilsan Sucuudigu ay la wareegayso naadigan.
“Waqtigii ay socdeen wada-hadallada ay suurtogalka ahayd in Newcastle ay ku iibsato shirkadda sheekhu, waxay soo waceen wakiilkayga Alessandro Moggi.” Ayuu yidhi Ciro Immobile oo ay da’diisu tahay 30 jir.
Ciro Immobile oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray: “Kaddib Premier League ayaa ansixin waayey hindisahaa, ama shirkadda ayaa ka laabatay, si fiican uma kala xasuusto. Laakiin waxaan ogahay in sidoo kale ay raadinayeen tababare Talyaani ah, Massimiliano Allegri ama Luciano Spalletti.”
Bishii dhowaanta dhamaatay ee July ayuu burburay qorshaha Sucuudigu ku doonayay inuu £300 milyan oo Gini ugu iibsado Newcastle United, waxaanay taasi hor istaagtay jawaabtii uu bixin lahaa Immobile, waxaase hadda uu kaliya kusii dhegsanaan doonaa Lazio iyo inuu kasii ciyaaro Stadio Olimpico.
“Waxa uu damacaygu yahay inaan Lazio joogo waligayba. Heshiiska cusub ee aanu cusboonaysiin doono, wuxuu noqon doonaa saddex sannadood, sidaa darteed wuxuu heshiiskaasi dhacayaa 2025 oo ah marka aan noqon doono 35 jir.” Ayuu raaciyey Immobile.
Waxa kale oo uu ka sheekeeyey ka hor intii aanu imanin Lazio iyo sidii xaalkiisu ahaa, waxaanu yidhi: “Ka hor intii aanan imanin Lazio, waxa aanu xidhiidho joogto ah lahayn Napoli, laakiin hal sabab ama mid kale, maanaan doonayn inaanu samayno heshiis.
“Naples waa magaaladii aan ku dhashay, mar walba Napoli waxaan kula socdaa kalgacal, laakiin Lazio ayaa isiisay, haddana isiinaysa wax aan la qiimayn karin.”
36ka gool ee horyaalka Serie A uu ka dhaliyey, waxa uu kusoo qabtay rikoodhkii gaarka u ahaa Gonzalo Higuain iyo Gino Rossetti oo uu kula biiray laacibiinta goolashii ugu badnaa ka dhaliyey Serie A xili ciyaaree gudihiisa, waxaana mar la weydiiyey sida ay goolasha intaas le’eg ee uu dhaliyey u taabteen qalbigiisa uu yidhi: “Waan waalan gaadhay, inaan ka horreeyo Cristiano Ronaldo iyo Robert Lewandowski, haddii aan akhriyo warqadda ku duuban abaal-marinta, gebi ahaanteed ba ma rumaysan karayo: Lionel Messi, Messi, Luis Suarez, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Messi.”